कानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले दियो उन्मुक्ति | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalकानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले दियो उन्मुक्ति
Home राजनीति कानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले दियो उन्मुक्ति
कानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले दियो उन्मुक्ति
काठमाडौँ : कानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाहीको साटो निर्वाचन आयोगले उन्मुक्ति दिएको छ । पारदर्शिता, समृद्धि, विकासको कुरा गर्ने राजनीतिक दल आफैं अपादर्शी छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आलटाल गरी उन्मुक्ति दिन खोजेको छ ।
राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले कारबाही किन नगर्ने भन्दै सातदिने स्पष्टीकरण १० असोजमा सोधेको थियो । सो कानुन उल्लंघन गर्नुका साथै राजनीतिक दलले आयोगको पत्रको जवाफसमेत दिएका छैनन् ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडयालले आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव बिदामा रहेकाले राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने विषयमा निर्णय हुन नसकेको बताए । कानुन उल्लंघन गर्ने जुनसुकै राजनीतिक दललाई आयोगले कारबाही गर्ने उनले बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव आएपछि कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गरिने उनले बताए ।
‘हामीले सातदिने स्पष्टीकरण सोध्यौं, प्रमुख चारसहित अधिकांश राजनीतिक दलले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिनुका साथै कानुन पालनासमेत गरेको देखिएन,’ पौडयालले भने, ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आएपछि हामीले कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गर्छौं ।’
आयोगले राजनीतिक दललाई १० असोजमा सातदिने स्पष्टीकरण सोध्यो, जसको म्याद १७ असोजमा सकियो । तर आयोगले अहिलेसम्ममा सो विषयमा के गर्ने÷नगर्ने भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन ।
आयोगका उपन्यायाधिवक्ता ओझाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण पत्र काटिसकेको बताए । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने र पत्रको जवाफ नदिने दललाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।
प्रमुख एवं राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एवं साना दलसहित ११८ राजनीतिक दलले कानुन उल्लंघन गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चलअचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, दफा ५३ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यको नाम विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।
दफा ५४ को उपदफा ५ को घ मा कुनै राजनीतिक दलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको खण्डमा ५ हजार जरिमाना गर्ने उल्लेख छ । राजनीतिक दलले सम्पति विवरण सार्वजनिक नगरेकाले सुरुमा यही दफाबमोजिम प्रत्येक दललाई ५ हजार जरिमाना गरिने आयोगले जनाएको छ ।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगले ऐनको दफा ५४ को उपदफा ७ मा सम्पत्ति विवरण पेस नगरेमा प्रत्येक व्यक्तिलाई १० हजार जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर कानुनअनुसार प्रमुख चारसहित ११८ राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा समेत आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकी खुट्टा कमाएको आरोप लागेको छ ।
कानुन उल्लंघन गरेका ११८ राजनीतिक दलबाट ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ राज्यको कोषमा जानेछ । तर आयोगले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ ।
आयोगका अनुसार अहिलेसम्ममा आठ साना राजनीतिक दलले सो कानुन पालना गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । स्पष्टीकरण सोध्नुभन्दा अघि आयोगले दलहरूलाई पत्र काट्दै सचेत गराएको थियो ।
आयोगमा दर्ता भएका १२६ दलमध्ये साना आठ दलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएका छन् । ११८ दलले अझै कानुन उल्लंघन गर्दासमेत कारबाही गर्ने आँट आयोगले गर्न सकेको थिएन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने आठ दलले कसैले पार्टीको सूचना पाटीमा त कसैले पत्रिकामार्फत नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । तर जनताबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्दै देशकै शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका चार राजनीतिक दलले अझै सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको भनेर कानुनको उल्लंघन गरेका छन् ।
कानुन उल्लंघन गरेबापत राष्ट्रिय चार राजनीतिक दलले मात्रै डेढ करोडभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगका अनुसार गान्धिवादी पार्टी नेपाल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, हाम्रो पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, मंगोल नेसनल अग्र्रनाइजेसन, नेपाली ग्रिन्स पार्टी र ग्रिन पार्टी नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यले कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेकपा, कांग्रेस, राजपा नेपाल र फोरम नेपालका नेताले दलका नेतासँग सम्पत्ति विवरण पार्टी कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको बताउँछन् । नेताहरुले नै सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कारण सार्वजनिक नगरिएको उनीहरुले बताउँछन् ।
कानुन उल्लंघन गरेबापत प्रमुख चार राजनीतिक दलले राज्यलाई १ करोड ५५ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको छ । राजपाले ८१ लाख ५० हजार, नेकपाले ४४ लाख १० हजार, फोरम नेपालले २४ लाख ५० हजार र कांग्रेसले ८ लाख ५० हजार जरिमाना राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजपा नेपाल ८१५, नेकपाका ४४१, फोरमका २४५ र कांग्रेसका ८८ जनाको केन्द्रीय समिति रहेको छ । प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले यी सबै केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत ३ जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा बनेको थियो । स्रोतका अनुसार नेकपाका ३० नेताले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
महाधिवेशन भएको अढाइ वर्ष बितेपछि कांग्रेसका नेताले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । तर पार्टीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
७ वैशाख २०७४ मा विभिन्न ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपा नेपालका कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म पार्टीमा विवरण नबुझाएका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
२ जेठ २०७२ मा संघीय समाजवादीसहितका दल र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालबीच एकीकरण भई बनेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पदाधिकारी र सदस्यले पार्टीमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाएनन्, न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउँदा श्रमिक निराश
मुटु रोग किन लाग्छ ? यसका लक्षण र बच्ने उपाय